Angela Ahrendts Anosheedzera Prototyping App Kutangisa muApple Chitoro muna Chikumi | Ndinobva mac
Angela Ahrendts Anosheedzera Prototyping App Kutangisa Apple Store muna Chikumi
Chikumi naJuly kazhinji mwedzi mishoma uko Apple inoita huwandu hukuru hwezviitwa zvekudzidzisa, mukati megadziriro yezviitiko zve Nhasi paapuro. Munguva yekupedzisira maawa isu takaziva iyo Chiziviso chaAngela Ahrendts pa twitter, kwaanopa chiitiko kune zvirongwa zvekuratidzira ichaitirwa muApple Store mukati memwedzi yaJune naJuly.
Vamwe ve lVagadziri venguva yemberi vane mukana wekugovana ruzivo rwakakosha uye mazano neboka reApple Store. Nhau idzi dzakauya pakuvharwa kweWWDC muSan José.
Angela Ahrendts anoona nezvezvitoro zveApple uye nekudaro anoziva zvakakwana kugadzirwa kwebasa kana chigadzirwa kusvikira chasvika pamaoko emutengi. Imhaka yeizvozvo inotsanangura maitiro ekugadzira maapps, seimwe yezvakakosha mukugadzirwa kwechigadzirwa chekupedzisira. Mharidzo yezviitiko zveApple yakauya mune yekufungidzira hurukuro kuWWDC pachayo.
Izvi zviito chikamu cheavo vakapihwa muna Chivabvu 2017 kuApple Chitoro muUnited Square muSan Francisco. Kubva ipapo, kwete chete epurogiramu dzekudzidzira dzakaitwa, asi zvakare kutora mifananidzo, vhidhiyo, mimhanzi, hunyanzvi uye dhizaini makosi, ese ane zvigadzirwa zveApple pane ese ari maviri iPad uye Mac.
Kwemamwe makore, zvakare Makosi anodzidziswa ediki diki eimba. Tim Cook iye pachake akataura chando chapfuura icho inofunga kudzidza kodhi yakakosha kupfuura mutauro wechitatu uye nekuda kweichi chikonzero chiri kuparadzira zvirongwa zvechirongwa pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Angela Ahrendts Anosheedzera Prototyping App Kutangisa Apple Store muna Chikumi
Apple Mepu inogona kuverengerwa mumapeji ewebhu nekuda kweiyo «MapKit JS» chishandiso